6 Zviratidzo Inguva Yekuchera Yako Analytics Software | Martech Zone
Yakanyatsogadzirwa bhizinesi njere (BI) software mhinduro yakakosha kune chero sangano rinoda kuona iyo ROI yezvavanoita online.
Kunyangwe iri yekutevera chirongwa, email kushambadzira mushandirapamwe, kana kufungidzira, kambani haigone kubudirira pasina kuteedzera nzvimbo dzekukura nemukana kuburikidza nekuzivisa. Analytics software inongotora nguva nemari kana ikasatora mhedziso yakajeka yekuti bhizinesi riri kuita sei.
Tarisa uone izvi zvitanhatu zvikonzero zvekudonhedza imwe analytics software uchifarira imwe inoshanda.
1. Inovhiringidza mushandisi interface
Usati wazvipira kune BI software, ita kuti vashandi vako vaiyedze uye vaone kana iyo interface yemushandisi inogona kubatanidzwa nyore nyore mukufamba kwavo kwebasa. Iyo clunky mushandisi interface inogona kunyatso kudzora maitiro ekuzivisa: vashandi vanofanirwa kutevedzera nzira yakagadziriswa yekuendesa zvabuda. Mapoka anoshanda pamwechete neBI software anofanirwa kuve neyakajeka, isingachinjike maitiro kuitira kuti kuedza kwevanhu kusapindirana uye kutambisa nguva.
2. Yakawandisa data
Kumwe kudonha kwevakawanda BI software mhinduro ndeyekuti chirongwa ichi chinoburitsa yakawandisa data rakashata pasina kurishandurira mumashandiro ekuita. Mamaneja nevatungamiriri vechikwata vanofanirwa kukurumidza kukwanisa kusiyanisa nzvimbo dziri kuita mushe kubva kune idzo dzinoda kutariswa. Vatarisana nemadziro enhamba, vashandi vanogona kutambisa nguva yakakosha vachinyora mishumo inogona kunzwisiswa.
3. "Saizi imwe inokwana zvese"
Haasi ese mabhizinesi anomhanya zvakafanana, uye yega yega sangano ine chaiwo metric inoenderana nezvayo zvido. BI software inofanirwa kuve inogadziriswa, saka mamaneja anokwanisa kusefa ruzha uye kutarisisa analytics iyo inonyanya kukosha. Semuenzaniso, makambani anopa masevhisi haadi kuongorora metric pakutakura nekutenga, kana vachikwanisa chero kuverengwa kunooneka. Analytics inofanira kukodzera madhipatimendi achishandisa data.
4. Kunyanya kugona
Semakambani anotsvaga chirongwa chakakwana cheBI, vanofanirwa kudzivirira analytics zvishandiso zvakanyanyisa kutarisa. Nepo hurongwa hwekuburitsa hungave hunopfuura pamabatiro ekuita kwevashandi, zvinogona kutyisa pakubata mamwe maitiro ekushanda. Makambani anofanirwa kuita tsvakiridzo yakakura muBI mhinduro kuti ave nechokwadi chekuti software hairegeredze nzvimbo iyo yakasimba inoda kunyatsoongorora.
5. Kushaikwa kwekuvandudzwa
Vakavimbika software vanogadzira vari kugara vachigadzira zvigadziriso padyo padhuze, senge kuchengetedzwa kwekuchengetedza, OS kugadziridzwa kwekuenderana, uye kugadzirisa bug. Chiratidzo chikuru chemurombo analytics system ndeye kushomeka kwekuvandudzwa, zvinoreva kuti vagadziri ve software havasi kugadzirisa chigadzirwa kuti vasangane nezvinodiwa zvebhizinesi.
Kana software yekuvandudza yaburitswa, inofanirwa kusimbisa chengetedzo kubva kutyisidziro itsva yedhijitari, uye chengetedza data rekambani rakachengeteka. Mhedzisiro inowanzo gadziridza mafambiro ebasa, bvumira vashandi kuti vagadzire mishumo nekukurumidza, uye vagadzire ruzivo rwakakodzera. Iwe unofanirwa kutarisa mawebhusaiti mawebhusaiti kuti uone kuti chigadzirwa chavo chinovandudzwa kangani uye uwane zano rekuti mhinduro iripo sei.
Makambani anovimba nehuwandu hwemapurogiramu esoftware, kusanganisira CRM dhatabhesi, POS masisitimu, uye projekiti manejimendi software. Kana iyo analytics mhinduro haigone kubatanidzwa mune yako tech nharaunda, iwe unotambisa nguva kuyedza kuunza data pamusoro manyore kubva kune mamwe masisitimu.
Makambani anofanirwa kuve nechokwadi chekuti mhinduro yeBI inosangana mushe nehurongwa hwavo huripo, masisitimu anoshanda, uye zvirongwa zvesoftware.
Sezvo makambani anoenderana nenguva yedhijitari nekugadzirisa maitiro kune akakwirira kumhanya, mabhizinesi anogona kuramba achikwikwidza neakarurama Mhinduro yeBI. Kana yako metric yazvino yapera, isina hunhu, yakaremerwa nedhata yekunze, kana kungoita zvisinganzwisisike, inguva yekuchinjira kune iri nani mhinduro.
Izvo zvakanakisa analytics mhinduro inogona kusundira kambani kumberi kwemutambo, ichibvumira kuti igamuchire mashandiro anoshanda, kurasikirwa nemaitiro asingabatsiri, uye kufambisa yakanangana neiyo huru ROI.
ShoutEm: Mobile Mapurogiramu uye Whitelabeled Mobile Apps